Phosphatidylserine (PS) သောက်သုံးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူး ၅ ခု - ခွင့်ပြုချက်
ပင်မစာမျက်နှာ > Phosphatidylserine (PS)
Phosphatidylserine (PS) သောက်သုံးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ။
ဇန်နဝါရီလ 11, 2021
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင် Phosphatidylserine Cofttek မှလက်ရှိစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုကိုထောက်ခံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းပြချက်များကိုတင်ပြသည်။ ပထမ ဦး စွာဒီဖြည့်စွက်ငွေသည်အကောင်းဆုံးသောစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ပြင်တွင်ဈေးကြီးသောထုတ်ကုန်များတွင် Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ဆေးသည်တတ်နိုင်သောဘက်တွင်ရှိသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ Cofttek မှဤဖြည့်စွက်ချက်ကိုစစ်ဆေးသည့်စက်ရုံတစ်ခုတွင်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်း၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ကိုလည်းသန့်ရှင်းစင်ကြယ်အဖြစ်အာနိသင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်ကောင်းသော Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ဆေးကိုဝယ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ cofttek.com.
Phosphatidylserine (PS) မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Phosphatidylserine (PS) ဆိုတာဘာလဲ။
Phosphatidylserine (ဓာတ်၊PS) phospholipid နှင့်လူ့ ဦး နှောက်အာရုံကြောတစ်ရှူးတွင်တွေ့ရသောအစားအသောက်ဖိုင်ဘာနှင့်အလွန်နီးစပ်သောဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Phosphatidylserine သည်သွေးခဲခြင်းလုပ်ငန်းတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ပြီး Phosphatidylserine သည်အာရုံကြောဆဲလ်များအကြားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသောကြောင့်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်အနောက်တိုင်းအစားအစာသည်နေ့စဉ်ဖော့စဖိတ်idylserine ၁၃၀ မီလီဂရမ်နီးပါးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ငါးနှင့်အသားများသည် Phosphatidylserine ၏ကောင်းသောအရင်းအမြစ်များဖြစ်ပြီး၎င်းကိုနို့ထွက်ပစ္စည်းများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင်နည်းပါးသည်။ soy lecithin သည် Phosphatidylserine ၏နောက်ထပ်ကောင်းသည့်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Phosphatidylserine ကိုခန္ဓာကိုယ်ကဖန်တီးနိုင်ပြီးသဘာဝရင်းမြစ်များဖြင့်အစားအစာမှတစ်ဆင့်စားသုံးနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်းကန ဦး သုတေသနအရ၎င်းသည်အသက်အရွယ်နှင့်အတူကျဆင်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ခေတ်တွင် Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ဆေးကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ဆေးများကို Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်သော hyperactivity disorder၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ ဒါ့အပြင် Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ဆေးတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထွက်ရှိမှု၊
ဤဆောင်းပါးတွင် Phosphatidylserine ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အတူစျေးကွက်တွင်လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ချက်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာပါမည်။
Phosphatidylserine ဆိုတာက phospholipid လို့ခေါ်တယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိဆဲလ်များကိုဖုံးအုပ်ကာကွယ်ပေးပြီး၎င်းတို့အကြားသတင်းစကားများသယ်ဆောင်သည်။ Phosphatidylserine သည်သင်၏စိတ်နှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုချွန်ထက်စေရန်အတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအရ ဦး နှောက်အတွင်းရှိဤအရာ ၀ တ္ထုများသည်အသက်အရွယ်အလိုက်လျော့နည်းသွားသည်။
၆-၁၂ ပတ်အကြာတွင် phosphatidylserine သောက်ခြင်းသည်အယ်ဇိုင်းမားရောဂါလက္ခဏာအချို့ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်မှုနည်းသောရောဂါလက္ခဏာများရှိသူများအတွက်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် phosphatidylserine သည်ထိရောက်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၎င်း၏ထိရောက်မှုလျော့နည်းသွားနိုင်သည်။
Phosphatidylserine ဆိုသည်မှာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ cortisol ထုတ်လုပ်မှုကိုဟန့်တားသောကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သည့်မြင့်မားသော cortisol အဆင့်များကိုလျော့နည်းစေပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့်ပိုမိုအိပ်စက်အနားယူခြင်းအားဖြင့် phospholipid အဟာရဖြည့်စွက်ဆေးဖြစ်သည်။
Phosphatidylserine (PS) ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုကြည့်ကြပါစို့။
တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုများအရ Phosphatidylserine သည်ကြာရှည်စွာဖြည့်စွက်ခြင်းသည်သိမြင်မှုကျဆင်းနှုန်းကိုလျော့နည်းစေပြီးကြွက်များတွင်လုံး ၀ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဤအပြုသဘောဆောင်သောနိဂုံးချုပ်အပြီးတွင် Phosphatidylserine သုံးစွဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလူသားများအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလေ့လာချက်များစွာအရ Alzheimer လူနာများအတွက် Phosphatidylserine ၏ 200 mg သွေးကြောသွင်းဆေးသည် dopamine နှင့် serotonin ပမာဏကိုမြင့်တက်စေကြောင်း၊ အခြေအနေကြောင့်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ Phosphatidylserine သည်ဂလူးကို့စ်ဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီးရောဂါမှသက်သာရာရစေသည်။ (2) Pubmed: Phosphatidylserine နှင့်လူ့ ဦး နှောက်
②၎င်းကို Nootropic အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်သာမန်အားဖြင့်အသုံးပြုသည်
Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ဆေးသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများအားသူတို့၏အာရုံကိုပိုမိုတိုးတက်စေရန်နှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုစွမ်းရည်ကျဆင်းစေရန်အတွက်မကြာခဏသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ Phosphatidylserine သည် Phosphatidylserine ၏မှတ်ဥာဏ်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့သောပထမဆုံးရောဂါသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းမှုနှင့်အတူ ၃၀၀ မီလီဂရမ်ပါသော Phosphatidylserine စားသုံးမှုနှင့်အမြင်အာရုံမှတ်ဥာဏ်နှင့်ဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာခဲ့သည်။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအရငါးဆီ Phosphatidylserine ၏မှတ်ဥာဏ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့ပြီး Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ချက်သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ချက်ချင်းပင်ပြန်လည်ခေါ်ဆိုမှုကို ၄၂% အထိတိုးတက်စေသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Phosphatidylserine သည်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်အသက်နှင့်ဆိုင်သောမှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်အပင်မှထုတ်ယူထားသော Phosphatidylserine ၏ထိရောက်မှုကိုသုတေသနပြုမှုမှာအကန့်အသတ် ရှိ၍ ဤနယ်မြေတွင်အလုပ်များစွာလိုအပ်သည်။
③ Phosphatidylserine စားသုံးမှုသည်လေ့ကျင့်ခန်းစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်သည်
အားကစားဆေးပညာတွင်ထုတ်ဝေသောအစီရင်ခံစာတစ်ခုကဖော့စဖိတ်ဒီဒီဆာဆာဖြည့်စွက်ဆေးသည်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းစွမ်းရည်တိုးတက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသက်သေပြရန်လုံလောက်သောအထောက်အထားများရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကပုံမှန် Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ဆေးသည်ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့နည်းစေသည်။ အလားတူပင်နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ Phosphatidylserine ဆေးသည် ၆ ပတ်ကြာဂေါက်သီးသမားများအနေဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီး Phosphatidylserine ကိုကဖိန်းဓာတ်နှင့်ဗီတာမင်များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းကပိုမိုကောင်းမွန်စေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ဤတိုးတက်မှုများကိုသိသာစွာမှတ်သားထားခြင်းမရှိသေးပါ။
④ Phosphatidylserine သည်စိတ်ကျရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကူညီပေးသည်
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စိတ်ရောဂါဖြင့်ထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရအသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်လူများတွင်ပုံမှန် Phosphatidylserine, DHA နှင့် EPA စားသုံးမှုသည်စိတ်ကျရောဂါကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ အလားတူစွာအခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအရ Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ဆေးသည်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်အပြီးတွင်စိတ်ဖိစီးမှု - cortisol (စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း) အဆင့်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရစေသည်။
Children ၎င်းကိုကလေးများတွင် ADHD ကုသရန်အသုံးပြုနိုင်သည်
၂၀၁၂ ခုနှစ်လေ့လာမှုက Phosphatidylserine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ADHD ရှိကလေးများနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်သော hyperactivity disorder ရှိကလေးများအပေါ်လေ့လာခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတွင် ADHD ရှိကလေးငယ် ၂၀၀ ပါ ၀ င်ပြီး omega-2012 fatty acids နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး Phosphatidylserine ကို အသုံးပြု၍ ၁၅ ပတ်ကုသမှုသည် ADHD ကိုကုသရာတွင်ထိရောက်သည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုကိုပေးသောကလေးများသည် hyperactive သို့မဟုတ် impulsive အပြုအမူနှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ADHA ရောဂါခံစားနေရသောကလေး ၃၆ ယောက်တွင်ဖော့စဖိတ်ဒိုင်ဆာဆာရီနင်အားဖေ့စဖိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို ၂ လကြာလေ့လာခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအပြီးတွင်ကုသမှုအဖွဲ့သည်မှတ်ဥာဏ်နှင့်အာရုံစိုက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကျိုးကျေးဇူးများအပြင် Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ဆေးသည်လည်းအောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေစွမ်းရည်တိုးတက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုတိကျမှုနှင့်မြန်နှုန်းတို့နှင့်လည်းဆက်စပ်သည်။
Phosphatidylserine ဆိုသည်မှာ glycerophospholipid ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် glycerophospholipid ဖြစ်သည်။ Ester ဆက်သွယ်မှုတွင် glycerol ၏တတိယနှင့်ကာဗွန်နှင့် glycerol ၏ phosphodiester ချိတ်ဆက်မှုမှ serine တို့ပါဝင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ Phosphatidylserine (PS) လိုအပ်ပါသလဲ။
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံနေရသည်ဟုခံစားရပြီးမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမှမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ကိစ္စရပ်များစွာတွင်၎င်းသည်သိပ္ပံနည်းကျလုပ်ဆောင်မှုအားကျဆင်းခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ပိုမိုတွေ့ရလေ့ရှိသော်လည်းငယ်ရွယ်သောလူကြီးများတွင်ရှားပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်သုတေသီများသည် Phosphatidylserine ၏သိသိသာသာလုပ်ဆောင်မှုကိုကုသရန်စွမ်းရည်ကိုအလွန်ယုံကြည်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာထိုဒေသရှိသုတေသနများတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်လူတို့၏ Phosphatidylserine ၏အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သောအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့် ADHD ကဲ့သို့သောအခြေအနေများကိုကုသရန်အပြင်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်စိတ်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းစသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် Phosphatidylserine ၏လုပ်ဆောင်ချက်အသေးစိတ်ကိုမလေ့လာမီ Phosphatidylserine (PS) ဆိုတာဘာလဲ။
Phosphatidylserine (PS) Uses ဆိုတာဘာလဲ။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ဆေးများကို Phosphatidylserine (PS) အသုံးပြုမှုကြောင့်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ စတင်သူများအတွက် Phosphatidylserine သည်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုကျဆင်းခြင်းကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ အလားတူပင်၎င်းသည်ကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်သူများအတွက် ADHD ကိုထိရောက်စွာပြသနိုင်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိ cortisol ပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းမှထွက်သောစိတ်ဖိစီးမှုများကိုထိရောက်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ခြင်းမှတ်ဥာဏ်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းထွက်ခြင်းတို့ကိုလည်းပြုလုပ်သည်။ Phosphatidylserine သည်စိတ်ခံစားမှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ပေးသည်ဟုလည်းလူသိများသည်။ ဤအကြောင်းပြချက်များနှင့်အခြားသောအချက်များကြောင့် Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။
cortisol ကိုလျှော့ချဖို့ phosphatidylserine ဘယ်လောက်ယူသင့်ပါသလဲ။
၏မှန်ကန်သောသောက်သုံးသော Phosphatidylserine (PS) ၎င်းကိုယူဆောင်လာသည့်အကျိုးအမြတ်အပေါ်မူတည်သည်။ ယေဘုယျသဘောတူညီမှုမှာ ၁၀၀ မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်သောက်သုံးခြင်းဖြင့်နေ့စဉ် ၃၀၀ မီလီဂရမ်ခန့်သောက်သုံးခြင်းသည်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Phosphatidylserine ADHD ကိုကုသရန်အသုံးပြုသောအခါ, တစ်နေ့လျှင်နေ့စဉ်မီလီဂရမ် 100 mg ကိုကလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လျှင် 300 mg သည်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အယ်လ်ဇိုင်းမားအတွက်မူ 200-400 mg ပမာဏသောက်ရန်လိုအပ်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းအထွက်တိုးတက်စေရန်အတွက် Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်စာကိုအသုံးပြုပါကအသုံးပြုသူများကိုတစ်နေ့လျှင် ၃၀၀ မီလီဂရမ်သောက်သုံးသောပမာဏထက်မပိုရန်တောင်းဆိုသည်။
လေ့ကျင့်ခန်း - စိတ်ဖိစီးမှုဖိအားမတိုင်မှီနှင့်ကာလအတွင်း ၁၀ ရက်လုံးလုံး cortisol တုံ့ပြန်မှုကိုသင်တစ်နေ့လျှင် PS ထပ်တိုးယူနိုင်သည်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ cortisol ဆိုတာဘာလဲ။
Cortisol သည် Steroid hormone ဖြစ်ပြီးဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ကိုယ်ခံအားတုန့်ပြန်မှုအပါအ ၀ င်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်များစွာကိုထိန်းချုပ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ဖိစီးမှုကိုတုံ့ပြန်ရန်ကူညီရာတွင်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ has မှပါဝင်သည်။
ပဲပုပ်လက်ဆီသင်၌ phosphatidylserine မည်မျှရှိသနည်း။
စီးပွားဖြစ်ပဲပုပ်ထုတ်လုပ်မှုလက်ဆီသင်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာ ၃၃-၃၅% ပဲပုပ်ဆီ။ 33-35% Phosphatidylinositols ။ 20-21% Phosphatidylcholine ။
Phosphatidylserine ကိုပဲပုပ်လက်ဆီသင်၌စုစုပေါင်း phospholipids စုစုပေါင်း၏ ၃% ခန့်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ phosphatidylserine ကိုသောက်သင့်သလဲ။
cortisol ပမာဏမြင့်မားသော Phosphatidylserine သည်ကန ဦး အဆင့်တွင်ပြုမူပါသည်။ cortisol အဆင့်များသည်အမြင့်ဆုံးရောက်လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်အလုပ်ဖိအားများကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေသို့နိုးထနေပါသလား။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများလာခြင်းတို့ကိုကာကွယ်ရန်နံနက်ယံ၌၎င်းကိုသောက်ပါ။
ညမှာ phosphatidylserine သောက်သင့်သလား။
Phosphatidylserine (PS 100; အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်တစ် ဦး မှနှစ် ဦး အထိယူပါ။ ) Phosphatidylserine ဆိုသည်မှာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ cortisol ထုတ်လုပ်မှုကိုဟန့်တားသောကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သည့်မြင့်မားသော cortisol အဆင့်များကိုလျော့နည်းစေပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့်ပိုမိုအိပ်စက်အနားယူခြင်းအားဖြင့် phospholipid အဟာရဖြည့်စွက်ဆေးဖြစ်သည်။
၆-၁၂ ပတ်ကြာကုသမှုခံယူပြီးနောက် phosphatidylserine သောက်ခြင်းသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါလက္ခဏာအချို့ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဒီရောဂါဟာပြင်းထန်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာမခံစားရသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Phosphatidylserine သည်အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်အစာအိမ်နာခြင်းကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တိရိစ္ဆာန်ရင်းမြစ်မှထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်များသည်ရူးသွပ်သောနွားမရောဂါကဲ့သို့သောရောဂါများကိုကူးစက်စေနိုင်သည်ဟူသောစိုးရိမ်မှုအချို့ရှိသည်။
L serine နှင့် phosphatidylserine အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
ဦး နှောက်ဆဲလ် (ဆိုလိုသည်မှာအာရုံခံဆဲလ်) ၏အမြှေးပါး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော phosphatidylserine ၏ပေါင်းစပ်မှုအတွက် L-serine သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်အပါအ ၀ င်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်လိုအပ်သောပမာဏကိုထိန်းသိမ်းရန်အစားအစာမှပြင်ပမှလိုအပ်သည်။
အဘယ်အရာကို serine ချို့တဲ့စေသည်?
Serine ချို့တဲ့သောရောဂါများသည် L-serine biosynthesis လမ်းကြောင်း၏စုပေါင်းထားသောအင်ဇိုင်း ၃ ခုအနက်မှတစ်ခုတွင်ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။
L Tyrosine သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာလုပ်သနည်း။
tyrosine ကို "L. " နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲဖြည့်စွက်ပုံစံဖြင့်ရောင်းချသည်ကိုသင်မြင်တွေ့နိုင်သည်။ Tyrosine သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏တစ်သျှူးများနှင့်၎င်း၏အရည်အများစုတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အားအင်ဇိုင်းများ၊ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများနှင့်အရေပြားခြယ်ပစ္စည်း melanin ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏အာရုံကြောဆဲလ်များအားဆက်သွယ်ပေးသည့် neurotransmitter များထုတ်လုပ်ရန်လည်းကူညီသည်။
Serine သည်ပိုလီယိုအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်ပြီးအပင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု၊ အပင်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ဆဲလ်အချက်ပြခြင်းတို့တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ပရိုတိန်းအတွက်အုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင်၊ Serine သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၊ ဘေ့အက်ဆစ်များ၊
သင် fosfatidylserine ကိုစားသုံးသော်လည်းပိုမိုစားသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပဲပုပ် (အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော)၊ ပဲဖြူ၊ ကြက်ဥအနှစ်၊ ကြက်သားအသည်းနှင့်အမဲသားအပါအဝင်များစွာသောအစားအစာများတွင်ရရှိနိုင်သည်။
phosphatidylserine ရှိဗီတာမင်များ၊ ဓာတ်သတ္တုများနှင့်အာဟာရဓာတ်များသည်အချို့သောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေသည်။ Phosphatidylserine သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အန္တရာယ်ရှိသောအခမဲ့အစွန်းရောက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျော့ချပေးရာတွင် antioxidant အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်ကိုလူသိများသည်။ ၎င်းသည်ဆီးချိုရောဂါနှင့်ကင်ဆာကဲ့သို့သောအခြေအနေများဖွံ့ဖြိုးရန်သင့်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ဘယ်လို phosphatidylserine apoptosis ၏အမှတ်အသားအဖြစ်ပြုမူ?
လူ့ phospholipid scramblases (hPLSCRs) သည်ဆယ်လူလာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ hPLSCR1 phatocytosis phosphatidylserine ထိတွေ့မှုအားဖြင့် apoptosis အစပျိုးလိုက်ခြင်း။ hPLSCR3 mitochondria အတွက် cardiolipin ထိတွေ့ကမကထပြု apoptosis mediates ။
ဦး နှောက်ဆဲလ် (ဆိုလိုသည်မှာအာရုံခံဆဲလ်) ၏အမြှေးပါး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော phosphatidylserine ၏ပေါင်းစပ်မှုအတွက် L-serine သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်အပါအ ၀ င်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်လိုအပ်သောပမာဏကိုထိန်းသိမ်းရန်အစားအစာမှပြင်ပမှလိုအပ်သည်
Phosphatidylethanolamine သည် Lactose permease နှင့်အခြားအမြှေးပါးပရိုတိန်းများစုဝေးရာနေရာတွင်ပါဝင်သည်။ ၄ င်းသည် 'chaperone' အနေဖြင့်အမြှေးပါးပရိုတိန်းများအား၎င်းတို့၏တတိယအဆင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများကိုမှန်ကန်စွာခေါက်နိုင်အောင်ကူညီသည်။
phosphatidylserine ဆိုတာ lipid လား။
eukaryotic အမြှေးပါးများမရှိမဖြစ်ပါဝင်သော Phosphatidylserine (PtdSer) သည် eukaryotic ဆဲလ်တွင်အပေါများဆုံး anionic phospholipid ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းဆယ်လူလာ lipid ၏ ၁၀% အထိရှိသည်။ PtdSer နှင့် ပတ်သတ်၍ လူသိများသောအရာများသည် apoptosis နှင့်သွေးခဲခြင်းတို့တွင် exofacial PtdSer ၏အခန်းကဏ္ is ဖြစ်သည်။
Phosphatidylcholine သည်အသည်းရောင်ရောဂါ၊ နှင်းခူရောဂါ၊ သည်းခြေအိတ်ရောဂါ၊ စောင်ရေပြhighနာများ၊ ကိုလက်စထရောမြင့်ခြင်းနှင့် premenstrual Syndrome (PMS) တို့ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ကျောက်ကပ်ကျောက်ကပ်ဆေးကြောခြင်း၏ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်မြှင့်တင်ရန်, နှင့်အိုမင်းတားဆီးဘို့။
phosphatidylserine သည် zwitterionic လား။
ထိုသို့သောပရိုတိန်းများသည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သော phospholipids (cardiolipin, phosphatidylglycerol, phosphatidylserine, phosphatidylinositol) သော်လည်းမ zwitterionic သို့မဟုတ် neutral phospholipids (phosphatidylethanolamine, phosphatidylcholine) ။
phosphatidylserine က phosphatidylcholine နဲ့အတူတူလား။
phospholidids phosphatidylserine (PS) နှင့် phosphatidylcholine တွေဟာသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ဒုတိယအများဆုံးထောက်ခံအားပေးသည့်အရာဖြစ်ပြီးအစားအသောက်ဖြည့်စွက်ချက်ကိုပိုင်ရှင်များကမှတ်ဉာဏ်တိုင်ကြားချက်များဖြစ်သည်။
ခံတွင်း polyunsaturated phosphatidylcholine ကစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေမှာ platelet lipid နဲ့ cholesterol ရဲ့ပါဝင်မှုကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။
တိုတောင်းသောအားဖြင့်, phosphatidylserine cortisol အဆင့်ဆင့်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူကူညီပေးသည်။ ဤတွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံ - စိတ်ဖိစီးမှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် adrenal glands cortisol ဟုခေါ်သောဟော်မုန်းကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်သွေးစီးဆင်းမှုကိုလျင်မြန်စွာဝင်ရောက်စေပြီးပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စေသည်။
Phosphatidylserine (PS) သည်ဘေးကင်းပါသလား။
ယခုအထိပြုလုပ်ခဲ့သည့်သုတေသနပြုချက်အရ Phosphatidylserine သည်ခန္ဓာကိုယ်၏ကောင်းကျိုးကိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းနှင့်နှုတ်ဖြင့်သောက်သောအခါတစ်နေ့လျှင် ၃၀၀ မီလီဂရမ်ထက်မပိုသော Phosphatidylserine ဆေးကိုသုံးလအထိသောက်သုံးနိုင်သည်။ ကလေးများသည် ၄ ​​င်းဆေးများကို ၄ လအထိသောက်နိုင်သည်။ သို့သော်နေ့စဉ်သောက်သုံးသောပမာဏထက် ၃၀၀ မီလီဂရမ်ကျော်လွန်ပါကအိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်အစာအိမ်ဆိုင်ရာပြasနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်နို့တိုက်နေသည့်မိခင်များသည် Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ဆေးများမှရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအုပ်စုများအတွက်ဤဖြည့်စွက်ဆေးများသည်အန္တရာယ်ကင်းသည်။
လူအများစုကအပင်အခြေပြု Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုပိုနှစ်သက်သည်မှာတိရိစ္ဆာန်အခြေပြုဖြည့်စွက်ဆေးများသည်အသုံးပြုသူများကိုတိရစ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိုင်သောရောဂါများနှင့်ထိတွေ့စေသည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည် သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမသုတေသနလေ့လာမှုကဒီစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့ဖို့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားမတွေ့ရှိရ။
ဖော့စဖိတ်ဒိုင်ဆာဆာ (PS) အမှုန့်ကိုအဘယ်မှာဝယ်ရမည်နည်း။
သင်သည် Phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မဆို Phosphatidylserine (PS) အမှုန့်ကိုအမြောက်အများဝယ်ယူလိုသူတစ် ဦး ဦး ဖြစ်စေ၊ စျေး ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာမှာ cofttek.com.
Cofttek သည်ကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ စျေးကွက်တွင် ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားပြီး ၀ ယ်သူများအကောင်းဆုံးရရှိရန်သေချာစေရန်кругласကော်မရှင်ကိုအလုပ်လုပ်သည်။ သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်။ Cofttek သည်အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ ဥရောပနှင့်မြောက်အမေရိကတို့တွင်ရှိသောဖောက်သည်များနှင့်ဖောက်သည်များရှိပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်များအားလုံးကိုပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်များဖြစ်လာစေရန်သေချာစေရန်ရည်ရွယ်သည့်အရောင်းအဖွဲ့တစ်ခုလည်းရှိသည်။ Cofttek မှရရှိသော Phosphatidylserine အမှုန့်သည် ၂၅ ကီလိုဂရမ်အသုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်မျက်မမြင်ယုံကြည်မှုရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ရှာနေလျှင် Phosphatidylserine (PS) အမှုန့်ကိုဝယ်ကြလော့ အမြောက်အများအတွက်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုစျေးဝယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
(1) PHOSPHATIDYLSERINE (၅၁၄၄၆-၆၂-၉)
(2) Pubmed: Phosphatidylserine နှင့်လူ့ ဦး နှောက်
(3) လူသားတို့ကိုလေ့ကျင့်ရာတွင် phosphatidylserine ဖြည့်စွက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
(4) လက်ဆီသင် phosphatidylserine နှင့် phosphatidic acid complex (PAS) တို့သည် premenstrual syndrome (PMS) ၏လက္ခဏာများကိုလျော့နည်းစေသည်။ ကျပန်း၊
(6) egt စူးစမ်းလေ့လာရန်ခရီး။
(7) Oleoylethanolamide (oea) - သင့်ဘ ၀ ရဲ့မှော်အရိပ်။
(8) Anandamide vs cbd: ဘယ်ကျန်းမာရေးကပိုကောင်းတာလဲ။ သူတို့ကိုသင်သိထားသင့်သမျှ
(10) မဂ္ဂနီစီယမ် l-threonate ဖြည့်စွက်ချက်များ: အကျိုးကျေးဇူးများ၊ သောက်သုံးသောနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ။
(11) Palmitoylethanolamide (ပဲ): အကျိုးကျေးဇူးများ, သောက်သုံးသော, အသုံးပြုမှု, ဖြည့်စွက်။
(12) resveratrol ဖြည့်စွက်၏ထိပ်တန်းကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို6။
(13) pyrroloquinoline quinone (pqq) ကိုသောက်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ။
(14) alpha gpc ၏အကောင်းဆုံး nootropic ဖြည့်စွက်။
(15) Nikotinamide mononucleotide (nmn) ၏အိုမင်းခြင်းကိုခံသောအကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ချက်။